किनकि जीवन सुन्दर छ- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
यो जीवन सुन्दर संसार सयर गर्न सहयोग गर्ने जहाज हो । कहिलेकाहीँ आँधीबेहरी आएर जहाजै डुब्लाझैं हुन सक्छ । तर, बाधाहरुबाट बाँचियो भने जीवन–यात्रा सम्झनलायक हुनेछ ।
वैशाख ३१, २०७९ शिक्षा रिसाल
काठमाडौँ — मलाई जीवनमा धेरै मामिलाले बिथोलिरहन्छन् । अक्सर एउटा प्रश्नले लखेटिरहन्छ- जीवनको कुन चरणमा पुगेपछि मानिसले त्यही जीवन सिध्याउँछ होला ? शरीरले सास छाड्नुअघि उसले ठ्याक्कै के सोचेको हुन्छ होला ? त्यतिबेला आँखाले देख्ने दृश्य कस्ता हुन्छन् होला ? अँध्यारो हुन्छ होला कि उज्यालो प्रकाश ?
अँध्यारो हुन्छ भने त्यसको रङ कालै हुन्छ कि इन्द्रेणीजस्तो ? अँध्यारोको आवाज कस्तो हुन्छ होला ? कलकल बगेको पानीजस्तो या हावाहुरीजस्तो ? त्यतिबेला शरीरमा के सल्बलाउँछ होला ? कुन विन्दुमा पुगेपछि मानिसले यो निधो गर्छ होला ?
अक्सर लखेटिरहने यिनै प्रश्नले मेरो मन बिथोल्छन् । प्रश्न आउँछन् अनि मलाई बाँच्न सिकाएर जान्छन् । यी प्रश्नले मलाई जीवनको अर्थ सिकाएर जान्छन् । अनि जीवन यसै सुन्दर लाग्न थाल्छ ।
जीवनको उत्पत्ति नै ब्रह्माण्डमा अनुपम उदाहरण हो । अहिलेसम्म जीवन पृथ्वीबाहेक अन्त सुनिएको छैन । पृथ्वीमा पनि करोडौं वर्षको जीव विकासक्रमले सम्भव भएको हो । हामीले बाँचिरहेको जीवन विशिष्ट छ । यो किनेर पाइँदैन । न त बेच्न सकिन्छ । जीवनसँगै आउने अनुभव, माया, प्रेम, आनन्द, परिवार, साथीभाइ, उत्सुकता र कलाले जीवनलाई सुन्दर बनाएका छन् । जो—जो यो धरतीमा टेक्न पाए, उनीहरू भाग्यमानी हुन् ।
म भाग्यमानी हुँ । तपाईं भाग्यमानी हो ।
तर, जन्म हाम्रो हातमा छैन । यो हामीले चाहेर पाएका होइनौं । जीवन हामीलाई चिठ्ठा परेको हो । त्यसैले मृत्यु पनि हाम्रो हातमा हुनु हुँदैन ।
यो जिन्दगीअघि के थियो, कसैलाई थाहा छैन । यो जीवनपछि के हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन । भोलि नै के हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन ।
‘सर्प्राइज’ ले भरिएको छ र त जीवन रंगीन छ ।
नेपाल दक्षिण एसियाकै खुसी देशको सूचीमा परेको खबर आयो । यो अस्वाभाविक खबर सुनेर म फिस्स हाँसेकी थिएँ । उता लाखौं नागरिकलाई लखेटेर शान्त सुतेको भुटान पनि आफूलाई खुसी देखाउन लागिपरेको छ ।
वरपर भद्रगोल, कुशासन, अराजकता, बेथिति देख्दादेख्दै खुसी हुन सक्ने मान्छे यो धर्तीमा अन्त कहीँ छैनन् । हामीजति खुसी कोही छैन । त्यही खबर सुनेर कति नेपालीले पहिलोपटक थाहा पाए होलान्— ओहो ! हामी त खुसी पो रहेछौं । थाहै थिएन ।
हामी नेपालीहरू स–साना कुरामा खुसी हुन्छौं । हाम्रा ठूला सपना छैनन् । काम गर्दा इन्टरनेट राम्रोसँग चलोस्— हामी दंग पर्छौं । सामान किन्न जाँदा २० रुपैयाँ छुट पाइयोस्— हामी ङिच्च हाँस्छौं । सडकमा जाम नहोस्— हामी खुसी, बाटो चिल्लो देखियोस्— हामी खुसी । साँझमा बत्ती नगइदिए त हाम्रो हरेक दिन विकेन्डजस्तै हुन्छन् । सरकारले घरअगाडिका खाल्डा टालिदिए हाम्रो खुसीले धुरी नाघ्छ ।
केही दिनअघि भृकुटीमण्डपमा चिया खाँदै थिएँ । केही युवाहरू यही विषयमा छलफल गर्दै थिए । खुसी देशका नागरिक भएर होला— बेलाबेला उनीहरू अट्टहास गर्थे । उनीहरूको एउटा वाक्यले भने म सिरिंग भएँ ।
एउटाले खुसीको उन्मादमा भन्यो, ‘मान्छेको जीवन यति पनि बेकार छैन कि उसलाई मर्न मन लागोस् । अरे यार, आत्महत्या किन गर्छन् होला ? त्यस्तो नकारात्मक सोच पनि आउन दिने हो ? सानो—सानो कुरामा खुसी हुन सकिँदैन ?’
नेपाल खुसी देश भएकै दिन सायद कसैले आत्महत्या गरेका थिए । उनीहरूको कुरा रोकिएन ।
‘केही दिनअघि झापाबाट काठमाडौँ आएकी एउटा केटीले बिजोगै बनाइदिइछ । अर्काको घरमा आएर किन मर्नुपरेको त्यसलाई ?’
धेरै महिनादेखि लेख्न खोजिरहेको ‘आत्महत्या’ सम्बन्धी लेखलाई त्यसपछि फेरि ब्युँताउन मन लाग्यो । संसारमा हरेक वर्ष मानसिक समस्याका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या ७ लाखभन्दा बढी छ । नेपालमा पनि आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या बर्सेनि
बढ्दो छ । सन् २०२१ मा मात्रै ७ हजारभन्दा बढीले आफ्नो जीवन अन्त्य गरे ।
म सुनिरहन्छु । आत्महत्याका खबर आउँदा म सुनिरहन्छु—
‘कस्तो काँतर रहेछ !’
‘जीवनमा आइपरेका समस्यासँग त जुध्नु नि । यसरी हार मानेर कहाँ हुन्छ ?’
‘यस्तो सुन्दर जीवन पाएको छ भाग्यले । यिनीहरू त नर्कमै जान्छन् ।’
आत्महत्या समाजमा बर्जित छ । कानुनले आत्महत्यालाई अपराध भन्छ । धर्मले त सहनै सक्दैन । धर्म भन्छ— आफूले आफ्नो नाश गर्नु पाप हो । आत्महत्या गर्नेहरू पापी हुन् । उनीहरूले कहिल्यै शान्ति पाउँदैनन् । अनन्तकालसम्म यो अस्तित्वमा उनीहरू
भड्किनुपर्नेछ । पुनर्जन्म पनि उनीहरूको
भाग्यमा हुनेछैन । कसैले आत्महत्या गर्दा अनेक टिप्पणी सुन्छु । काँतर, हिम्मत नभएको, हुतीहारा, भगौटे, स्वार्थीजस्ता शब्द ‘ट्रेन्डिङ’ मा हुन्छन् । जसले आफूलाई सिध्यायो, उनीहरू कसैका हुन्नन् । समयसँगै उनीहरू पनि सबैको स्मृतिबाट हराएर जान्छन् । उनीहरूले किन यसो गरे— कसैले बहस गर्दैन । कसैले चिन्तन गर्दैन ।
आत्महत्याका प्रमुख कारणबारे धेरैलाई थाहा छ । पहिलो मानसिक स्वास्थ्य नै हो । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या निम्त्याउने प्रमुख कारणहरू आर्थिक संकट, गरिबी, धोका, जीवनदेखि निराशाले निम्त्याउने मानसिक विचलन आदि हुन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को वेबसाइटअनुसार, हरेक वर्ष ७० हजारले आफ्नो ज्यान लिन्छन् । त्योभन्दा बढी आत्महत्याको प्रयास गर्नेहरू हुन्छन् । ७७ प्रतिशत आत्महत्या गरिब देशमा हुन्छन् । १५–१९ वर्ष उमेर समूहमा मृत्युको चौथो कारण आत्महत्या हो ।
यो सबै तथ्यांक हामीमाझ छ । तर, हामी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे बोल्न र सुन्न डराउँछौं । डिप्रेसन र एन्जाइटीबारे बोल्नुपरे हामी बिटुलो हुन्छौं ।
एक दशकअघि मैले चिनेकी दिदीकी बुबाले आत्महत्या गर्नुभयो । न घरमा कुनै समस्या थियो न आर्थिक संकट । समाजले देख्ने दृश्य सपाट थियो— त्यो घरमा ‘ईश्वरले बास’ गरेका थिए । तर, बुबा क्लिनिकल डिप्रेसनबाट दिनरात निसास्सिँदा त्यो घरमा ईश्वर बसेन ।
केही मान्छेहरू सोध्थे, ‘किन आत्महत्या गर्नुभयो ?’
केही मान्छेहरू उत्तर सुन्थे । धेरै मान्छेहरू सुनेर पनि नबुझी हिँड्थे ।
कतिलाई लाग्यो— घरमा पक्कै केही समस्या थियो ।
कतिले अनुमान गरे— श्रीमतीको पक्कै कतै अफेयर थियो ।
कतिले निर्णय नै सुनाइदिए— ऋणमा डुबेको थियो ।
ती दिदीले कसैलाई भन्न सकिनन्, ‘बुबा डिप्रेसनमा हुनुहुन्थ्यो, हामीले बुझ्नै सकेनौं ।’
उनले मात्रै होइन, हामी धेरैले बुझ्नै सक्दैनौं ।
दिदी पनि लामो समय डिप्रेसनको सिकार भइन् । भन्थिन्, ‘बुबा गुमाउनुको पीडा त छँदै छ, त्यहीमाथि मेरै कारण बुबाले आत्महत्या गरेको आरोप लगाउनेहरू पनि थिए । मनको घाउ त क्यान्सरजस्तो हुने रहेछ नानी ।’
२०१९ जुनमा भारतीय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्या खबरले म बिथोलिएँ । त्यसपछिका केही दिन मेरा लागि सजिला थिएनन् । म हरक्षण सोचिरहन्थें । मलाई मन रित्तो र तीतो भएजस्तो
भइरह्यो । पेट पोलिरह्यो ।
सुशान्तले किन यसो गरे ?
भौतिक आँखाले हेर्दा उनका करोडौं फ्यान थिए । ट्वीटरमा लाखौं फलोअर्स थिए । तर, उनी चुपचाप अलप भए । त्यति धेरै मानिसको प्रिय भएर पनि उनीसँग अन्तिममा कोही थिएन ।
उनले धक फुकाएर भन्न पनि सकेनन्, ‘मलाई डिप्रेसन छ...।’
सुशान्त बोलेनन् । नबोली उनी गए । बोल्नु र नबोल्नुको भेद कहिलेकाहीँ म सोची बस्छु । म त बोल्छु । मेरा घरका हरेक मान्छे बोल्छन् । मेरा वरपरका हरेक मान्छे बोल्छन् ।
म बोलेको उनीहरू सुन्छन् ? उनीहरू बोलेको वरपरका अरूले सुन्छन् ?
सुन्नुको अर्थ उनीहरू मात्रै बुझ्छन्— जो कसैलाई केही सुनाउन चाहन्छन् ।
सुशान्तको आत्महत्यापछि सामाजिक सञ्जाल जाग्यो । मलाई लाग्यो— मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे अब मान्छे जाग्नेछन् । हेल्पलाइन नम्बरहरू बढ्नेछन् । एउटा मान्छेको मन अर्को मान्छेले पढ्नेछ । एउटा मान्छेको दुःख अर्को मान्छेले बुझ्नेछ ।
संसार आफ्नै लय र गतिमा चलिरह्यो । सुशान्तको आत्महत्या रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट, करण जोहर, आलिया भट्टहरूको बहसमा टुंगियो । सुशान्तको मानसिक स्वास्थ्यबारे ‘गोदी मिडिया’ बोल्नै चाहेन ।
त्यसपछि म झस्किएँ ।
संसारमा सबैभन्दा सजिलो मर्नु हो कि बाँच्नु ?
मानसिक स्वास्थ्यसँग जुध्ने व्यक्तिका परिवारलाई त्यो पीडाले सधैं अचेटिरहन्छ ।
डिप्रेसन आफूलाई नभई बुझिन्न । भन्छन्— आफू नमरी नर्क देखिँदैन । डिप्रेसन त्यही नर्क हो । यसका पनि प्रकार छन् । माइल्ड, मोडरेट र सिभेयर । सिभेयर डिप्रेसनको यो खाडलमा भास्सिइरहँदा मृत्यु नै अन्तिम विकल्प लाग्छ । आत्महत्या प्रयास गर्नेहरू यसै भन्छन् ।
मानिसहरू किन आत्महत्या प्रयास गर्छन् ?
अनुभवीहरू भन्छन्— आत्महत्याको प्रयास गर्दा आफू भइँदैन । विवेक नियन्त्रणमा हुँदैन । चेतनाशून्य हुन्छ । चरम अवस्थामा पुग्दा सही, गलत, असल, खराब, परिवार, जिन्दगी, प्रेमी, प्रेमिका, सफलता, असफलता सब गौण लाग्छन् । सम्पूर्ण जीवन अर्थहीन लाग्छ । त्यतिबेला जीवनको अर्थ, मूल्य, सौन्दर्य शून्य लाग्छन् ।
सिजोफ्रेनिकलाई कोही अरू नै मानिस वा तत्त्वले डोर्‍याइरहेजस्तो लाग्छ । यो रोगको चरम अवस्थामा मानिस आवाज नै आवाजले घेरिन्छ । फिल्म र कथाहरूमा सिजोफ्रेनियालाई अतिरञ्जित देखाइए पनि केही हदसम्म त्यो साँचो हो । कल्पना गर्नुस् त— तपाईंलाई दिनरात छाया र आकृतिहरूले
पछ्याइरहन्छन् । सुत्दा होस् या उठ्दा— आवाजहरूले घेरिरहन्छन् । बाहिर निस्किँदा पनि अँठ्याइरहन्छन् । सुत्दा ऐंठन हुन्छ । कसैले छाती थिचिरहेजस्तो, बिस्ताराको छेउमा घोप्टो मुख लगाएर बसिरहेको र ढोकाबाट हेरिरहेको दृश्य हरेक दिन देख्नुपर्दा मानिसमा कति विचलन आउँछ होला ? सुन्दा भूतप्रेतका कथाझैं लाग्छन् । तर, सिजोफ्रेनियाबाट ग्रसितहरूका लागि यी दैनन्दिनका सत्य कथा हुन् ।
अध्ययनका अनुसार, सिजोफ्रेनियाका कारण १० प्रतिशतले आत्महत्या गर्छन् । नेपालमा पनि सिजोफ्रेनियाका पीडितहरू धेरै छन् । तर, सामाजिक कारणले खुल्न सक्दैनन् । किनकि नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श सतही छ । यहाँ मानसिक स्वास्थ्य परामर्श वा थेरापीको समीक्षा भएकै छैन । एक त महँगो, त्यहीमाथि परामर्शदाताहरूको कलुषित व्यवहार ! काठमाडौंमा मात्रै सीमित यो अपरिपक्व परामर्श सेवा राजधानीबाहिरका बिरामीबाट प्रकाश वर्षभन्दा टाढा छ । चर्को शुल्कका कारण काठमाडौंकै बिरामी पनि चुपचाप आफूसँग लडेर बसिरहेका छन् । मानसिक स्वास्थ्य भन्नेबित्तिकै ‘दिमाग खुस्किएको पागल’ भनेर बुझ्ने समाजलाई उनीहरू कसरी बुझाऊन् ? परामर्शदाताहरू प्रायःले डिप्रेसन वा अरू मानसिक समस्या आफैंले अनुभव गरेका हुँदैनन् । उनीहरूले डिप्रेसन पढेका त छन्, तर अनुभव गरेका छैनन् । पेसाका रूपमा मात्रै लिनेहरूसँग दयाभन्दा धेरै बढी केही हुँदैन ।
मानिस ‘सुसाइडल’ कति बेला हुन्छ, त्यसको ठेगान हुँदैन । आत्महत्या गर्ने मानिसको उद्देश्य जीवन समाप्ति नै हो या चलिरहेको परिस्थितिबाट मुक्ति ? यस्ता प्रश्नको एउटै जवाफ छैन । खासमा उनीहरू आफ्ना विचारसँग हारेर यो निर्णय लिन्छन् । आत्महत्या रोकथाम हटलाइनहरू नेपालमा नभएका होइनन् । केही वर्षयता सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाटै यसको पहल भएको छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन । साँझ परेपछि सरकारी कार्यालयझैं ती बन्द हुन्छन् । राति १२ बजे कसैले त्यस्ता हटलाइनमा फोन गर्‍यो भने नउठेर टुँ...टुँ... गर्न थाल्छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्ष आत्महत्या गर्नेको संख्या ७,१४१ थियो, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १४.२ प्रतिशतले बढी हो ।
आत्महत्याको प्रयास विफल हुँदा जीवनभरका लागि थपिने पीडाको पाटो छुट्टै छ । शारीरिक रूपमा पुग्ने क्षतिले जीवन नै बर्बाद पारिदिन्छ । यसमा अपांगता पहिलो सूचीमा पर्छ । त्यस्तै, सामाजिक दृष्टिकोणमा बदलाव, साथीभाइद्वारा बेवास्ता आदि असर चीरकालसम्म रहन्छन् । यसले त झनै मानसिक पीडा दिन्छ ।
परीक्षामा फेल हुँदा वा प्रेमी—प्रेमिकाले धोका दिँदा आवेशमा आएर गरिने यस्ता निर्णयहरू घातक हुन्छन् । तर, त्यो अवस्थासम्म कसले पुर्‍यायो ? राम्रो अंक, राम्रो करिअर, पैसा र सफलतालाई यति धेरै प्राथमिकतामा राखिएको छ कि अलिकति असफल हुनासाथ सबै सकिएझैं लाग्छ । मानसिक रूपमा दबाब दिने यस्ता गणितीय तत्त्व हुन्थेनन् भने आत्महत्याको दर यति भयावह हुन्थेन ।
अझै कोरोना महामारीपछि त किशोरकिशोरी र बालबालिका मानसिक स्वास्थ्य समस्याको चपेटामा छन् । लकडाउनका बेला धेरैले आफूलाई सिध्याए । समाचार बने । तर, कुनै मानसिक रोगले निलेको उनीहरूलाई पत्तै भएन । मानसिक स्वास्थ्यप्रति पूरै बेखबर हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । विद्यालयमा हुने सजायका प्रक्रियाले पनि विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ । शारीरिक सजाय सहरी क्षेत्रमा धेरै कम भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा अझै उस्तै छ । त्यससँगै, नेपालका कुनै पनि विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि छुट्टै मनोपरामर्शदाता छैनन् । शिक्षकहरूले धम्क्याउँदा चिठ्ठी लेखेर आत्महत्या गरेका उदाहरण हाम्रैसामु छन् ।
केही समयअघि सरकार, पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा भाग लिएँ । मलाई लागेको थियो— मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे छलफल हुनेछ । यसबारे बोल्न र सचेतना जगाउनका लागि नयाँ यात्रा थालिनेछ । तर, कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य सचेतनाबारे बहस त भएन नै, उल्टो आत्महत्याको विषयलाई समाचार कसरी बनाउने वा आत्महत्या शब्दलाई कसरी विस्थापन गर्ने भनेर प्रशस्त सुझाव आए ।
म चुपचाप बाहिरिएँ । कहिलेकाहीँ यसरी चुपचाप बाहिरिनुपर्दा म दुःखी हुन्छु ।
यस्तै दृष्टान्तले मर्मान्त पारेपछि म एक दिन आफूवरपरको समाजमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम बढाउने प्रस्तावसहित वडा कार्यालय गएँ ।
‘विद्यालय तहदेखि नै यसबारे खुलेर बोल्ने प्लेटफर्म दिए मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी गलत धारणा कम गर्न सकिन्छ, आफ्नो शारीरिकसँगै मानसिक परिवर्तन र सुस्वास्थ्यका बारेमा उनीहरूले जान्ने—बुझ्ने मौका पाउनेछन्,’ मैले भनें ।
वडा सचिवले खरर उत्तर दिए, ‘एक त बल्लबल्ल स्कुल खुल्या छन्, अहिल्यै यस्तो कार्यक्रम नगरौं । विद्यार्थी यसै तनावमा छन् ।’
म छक्क परें ।
मानसिक स्वास्थ्य भन्नेबित्तिकै जटिल बुझ्ने र योबारे कुरै गर्नु हुँदैन भन्ने सोचले पीडितको संख्या झन्झन् बढ्दो छ । यस्ता समस्यासँग जुधिरहेकाहरूले सबैसँग खुलेर बोल्न सक्ने वातावरण बनाइदिन यो सरकार र समाज कसैले सकेकै छैनन् । कोरोना महामारीका बेला मानसिक स्वास्थ्य, परामर्शबारे बहस भनेर ठूलाठूला कुरा भए पनि अहिले ती सबै पहल सेलाएका छन् ।
हाम्रो समाजमा यस्ता धेरै पात्र छन्, जो
चुपचाप कसैले मूल्यांकन गर्ला भनेर एक्लै रोएर बस्छन् । कोही परिवार सम्हाल्दासम्हाल्दै भित्रभित्रै
यति टुटिसकेका हुन्छन् कि आफू को हो, बिर्सिन थाल्छन् । कोही त्यस्ता छन्, जो आफ्ना मान्छे
गुमाएको पीडाले रातदिन छटपटाइरहन्छन्, तर मनको आँधीबेहरी कसैलाई सुनाउन सक्दैनन् । एउटा घटनामा आफ्ना प्रिय व्यक्तिलाई गुमाएपछि ‘पीटीएसडी’ र डिप्रेसनले ग्रसित एक साथी भन्छ, ‘यो डिप्रेसनले मान्छेलाई स्वार्थी बनाउँछ । मान्छेलाई बिस्तारै पत्थर बनाउँछ । भावनाहीन वस्तु बनाउँछ । न आफ्नो माया लाग्छ न अरूको । आँखैअघि माकुराको जालोझैं फैलिएको अन्धकारमा डुबेर मान्छेले जीवनबाट
मुक्ति चाहन्छ ।’
मान्छे किन रुन्छ ? किनकि रुन सजिलो छ ।
रुन पनि एक्लै सजिलो ठान्छ मान्छे । हामी रोएको अनुहार देख्न चाहँदैनौं ।
मान्छेहरू भन्छन्— सकारात्मक सोचौं । सकारात्मक सोच्ने मान्छेको संगत गरौं । सकारात्मक मानिसले सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ ।
त्यसो भए आफ्नो नकारात्मक सोचाइसँग लडिरहेका मान्छेको संगत कसले गर्छ ? मुस्कुराएको मात्र हेर्न चाहने मान्छेहरूको भीडमा चुपचाप र उदास मान्छेको अनुहार कसले हेर्छ ?
कोही किन दुःखी हुन्छ ? कोही किन उदास हुन्छ ?
जो गए, तिनीहरू काँतर होइनन् । पीडित हुन् । मानसिक स्वास्थ्यबारे थाहै नपाई, आफ्ना गुनासा कसैलाई सुनाउनै नसकी उनीहरू आफूसँग लड्दालड्दै हारे । यो सुन्दर संसारबाट अलप भए । उनीहरूलाई जीवनको भीमकाय दर्शन होइन, माया र सहानुभूति मात्रै चाहिएको छ । ताकि कसैले मृत्यु रोज्नु नपरोस् । आत्महत्या गर्नु नपरोस् । हामी ठीक छैनौं भने ठीक हुनेछौं । यो समस्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । डिप्रेसन पनि निको हुन्छ । एन्जाइटीको उपचार सम्भव छ । थेरापीहरू छन् । आफ्नो मन र आफूलाई बुझ्न सके अघि बढ्न सकिन्छ ।
किनकि जीवन सुन्दर छ । यो जीवन सुन्दर
संसार सयर गर्न सहयोग गर्ने जहाज हो । यो जहाजको सयर साँच्चिकै सुन्दर छ । यसमा सयर गर्दा
कहिलेकाहीँ ‘सी सिकेनस’ लाग्न सक्छ । कहिलेकाहीँ आँधीबेहरी आएर जहाजै डुब्लाझैं हुन सक्छ । जहाज बाटो बिराएर महिनौंसम्म हराउन पनि सक्छ । कहिलेकाहीँ बरफका ढिक्काहरू ठोक्किन पनि आउन सक्छन् । तर, ती बाधाहरूबाट बाँचियो भने यात्रा सम्झनलायक हुनेछ ।
त्यसैले, मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई वर्जित नगरौं । छलफल गरौं । सचेतना बढाऔं । यसबारे खुलेर बोल्न सक्ने वातावरण बनाऔं । किनकि भन्छन् नि— हरेक मानिसको जीवनमा आत्महत्याको सोच एक न एक पटक जरुर आउँछ आउँछ ।
तर, यो सोचाइ रोक्न सकिन्छ ।
तथ्यांक भन्छ— आत्महत्या प्रयास गर्नेहरूलाई उचित परामर्श दिइयो भने ९३ प्रतिशतले दोस्रो पटक प्रयास गर्दैनन् । हामीले कदम उठायौं भने ती ७ प्रतिशतलाई पनि जोगाउन सकिन्छ ।
जसले यो कठोर संघर्ष गरिरहनुभएको छ, सबैलाई भन्न चाहन्छु— दिमागभित्रको शून्यता र नैराश्य एक दिन हटेर जानेछ । उज्यालो आउनेछ । रङहरू फर्किनेछन् । हरेक सेकेन्ड भार भइरहेको जीवन सिमलको भुवाजस्तै हलुका हुनेछ । केही सेकेन्ड वा मिनेटको आवेगले यति सुन्दर र अनुपम जीवन नमासियोस् ।
कतै पढेकी थिएँ— अन्त्यमा सबै ठीक हुन्छ ।
यदि ठीक छैन भने त्यो अन्त्य होइन ।
प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७९ ०८:४३